u-Ontong uqonde ukuthuthukisa ukuvimba kwisizini entsha
Justin Ontong ©Muzi Ntombela/BackpagePix
Umqeqeshi wokuvimba u-Justin Ontong uhlose ukuthuthuka okukhulu kwisigaba sakhe uma kuqala isizini ka-2020/21. Ukuqala kwayo kuhlehliswe i-COVID-19 kodwa izwe lizobe liku-lockdown level one kusukela ngesonto elizayo, kancane kancane izinto zibuyela isimweni.
Uma bebuyela, u-Ontong uthi ufuna ukugcizelela kakhulu ekuvimbeni, indawo ayibheka kakhulu ngehlobo lama-English lapho i-West Indies, i-Pakistan ne-Australia bavakashela lelalizwe.
“Bekukuhle ukubona ikhilikithi enhle kumabonakude,” esho. “Bengilandela i-series ene-England futhi ukuvimba okusezingeni eliphezulu.”
“Thina njengama-South Africans, siyaqonda ukubaluleka kokuvimba nokuthi kukhetheke kakhulu. Ngicabanga ukuthi kamuva, sikuthathe kancane njengoba iNingizimu Afrika yayaziwa njengeqembu elimandla ekuvimbeni.”
“Ngakho, kumele sisebenze kanzima futhi sinqobe izikhathi ezinkulu enkundleni ngoba lokho kungakunqobisa noma kukuphuce umdlalo. Lokho yinto okumele sigxile kuyona ngoba njengeqembu, yilapho la ongakhonjiswa uma ungena kumdlalo.”
Ngenkathi i-Cricket South Africa (CSA) isebenza kanzima ukubuyisa umdlalo kanye nokuphetha izinsuku zamasizini ama-domestic nama-international, u-Ontong uthi kuningi ukuzimisela kuwona wonke umuntu ukubuyela enkundleni yokudlala.
Yasesheshe yaphela isizini ngoMashi ngesikhathi igciwane liphoqa ukuvalwa komhlaba futhi ikhilikithi eyadlalwa kwaba imidlalo ye-3TeamCricket (3TC) Solidary Cup ngoJulayi.
“Kunenjabulo eningi kubadlali ekubuyeleni enkundleni yokudlala,” kusho lo owayeshaya kuma-Proteas u-Ontong. “Iqembu labadlali abancane esinalo, ngakho balambele impumelelo.”
“Nginesiqiniseko sokuthi bakuma-nets futhi basebenza kanzima ukuze babuye ngamandla. Ukungabi nethuba lokudlala kwabanye abadlali, angizwa sengthi baphelelwe ukubekezela. Ngicabanga ukuthi bekuqabula kubadlali abancane ukuthi bacabange ngemidlalo yabo, ukubona ukuthi ikuphi abangalulama khona namaphutha abo kwimidlalo yabo.”
“Ngicabanga ukuthi iningi indlala nentokozo yokubuyela enkundleni.”
iNingizimu Afrika iqembu eliguqukayo kulandela imihlalaphansi yabadlali abaningi abakhulile kumdlalo. u-Ontong noma kunjalo, ukholwa ukuthi iqembu elikhon alabadlali banekhono lokukhuphukela phezulu esikhathini esizayo esiseduze.
“Ngicabanga ukuthi uma kukhulunywa ngekusasa lama-Proteas, sinethemba langempela,” esho eqhubeka. “Sijabule kakhulu ngalokhu okuzokwenzeka ngekusasa.”
“Amathemba ami ngesizini entsha ukuthi ngikulindele ukubona ukuthi leliqembu labadlali abancane bangenzani. Ngikulindele ukusebenza nabo kanye nokuzama ukubenza abadlali abangcono bekhilikithi.”
“Sisesigabeni sokwakha kabusha futhi ngiyajabula ukuba ingxenye yalokho. Kuzoba nokufunda okuningi okwenzekayo, ikakhulukazi uma sidlala emazweni ahlukile… leso sipiliyoni kanye nesivivinyo kanye nezimfuno ezizobekwa kulaba bafana ngezinye zezinselelo abazobhekana nazo”
“Kodwa sinobuchwepheshe eqenjini elizobasiza ngalokho. Ezemidlalo emhlabeni wonke kumayelana nokubekezelela incindezi futhi yilapha la esingasiza khona labadlali abancane, ngakho ngikulindele,” esho evala u-Ontong.
u-Shamsi uyathemba ngekusasa lama-Proteas u-Van der Dussen ukulindele ukuhlola okusha kwi-"Proteas way" "Sidinga ukunqoba imidlalo" - u-Ngidi Kungiqinisile ukulimala – u-Ngidi u-Verreynne ubonga akufunde kuma-Proteas u-De Kock uzoba ukapteni wama-Proteas weqembu lama-T20, kubuya u-Steyn kwabizwa u-Magala no-Van Biljon kuma-T20 Ukuma kweqembu lama-Proteas kuma-ODI Babizelwe i-Test yokugcina abadlali abadedelwa kuma-Proteas i-CSA imemezela iqembu elifanayo lama-Proteas kuma-Test asele kwi-series u-Petersen ubizwe okokuqala kuma-Proteas u-Boucher ugculisekile ngenqubekelo phambili yama-Proteas